Wopɛ sɛ Wo ne Onyankopɔn Fa Adamfoɔ?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zande Zulu
“Sɛ wo ne Onyankopɔn fa adamfoɔ a, ɛma wote nka sɛ wowɔ ahobammɔ na hwee nhia wo. Ɛma wote nka sɛ Onyankopɔn ani wɔ wo so.”—CHRISTOPHER, ABERANTEWA BI A ƆWƆ GHANA.
“Sɛ wohyia ɔhaw a, Onyankopɔn hu. Saa bere no paa na ɔma n’ani kũ wo ho, na ɔdɔ a ɔyi no adi kyerɛ wo nso deɛ yɛnka.”—HANNAH, ABAAYAA A ƆWƆ ALASKA, U.S.A. WADI MFIE 13.
“Biribiara nni hɔ a ɛsom bo na ɛma nnipa koma tɔ ne yam sen sɛ ɔbɛhu sɛ Onyankopɔn yɛ n’adamfo!”—GINA, ƆYƐ ƆBAA A ƆFI JAMAICA. WADI BƐYƐ MFIE 45.
Ɛnyɛ Christopher, Hannah, ne Gina nko ara na wɔte nka saa. Nnipa a wɔwɔ wiase no mu pii hu Onyankopɔn sɛ wɔn adamfo. Wo nso ɛ? Onyankopɔn yɛ w’adamfo anaa? Sɛ wote nka sɛ Onyankopɔn yɛ w’adamfo a, dɛn na woyɛ a ɛbɛma wayɛ w’adamfo paa? Anaa afei na wopɛ sɛ wofa no adamfoɔ? Ebia w’adwene bɛyɛ wo sɛ: ‘Onipa dasani deɛ, menam he kɔfa adeɛ nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn adamfoɔ? Sɛ ɛbɛyɛ yie saa a, dɛn na ɛbɛhia sɛ woyɛ?’
WO NE ONYANKOPƆN BƐTUMI AFA ADAMFOƆ
Bible ma yɛhu sɛ yɛbɛtumi afa Onyankopɔn adamfoɔ ma ayɛ yie. Ɛsan ka sɛ Onyankopɔn frɛɛ tete Hebrini agya Abraham sɛ ‘n’adamfo.’ (Yesaia 41:8) Afei nso, Yakobo 4:8 ka sɛ: “Mommɛn Onyankopɔn na ɔbɛbɛn mo.” Wei nyinaa kyerɛ sɛ nnipa ne Onyankopɔn bɛtumi afa adamfoɔ. Nanso asɛm no ne sɛ, Onyankopɔn a yɛnhu no deɛ, yɛbɛyɛ dɛn ‘abɛn’ no afa no adamfoɔ?
Sɛ yɛbɛtumi anya saa asɛm no ho mmuaeɛ a, gye sɛ yɛhwɛ sɛnea nnipa fa adamfoɔ. Ansa na nnipa mmienu bɛtumi afa adamfoɔ no, obiara hu ne yɔnko din. Ɛno akyi no, wɔtaa bɔ nkɔmmɔ ma obiara ka ne koma mu nsɛm kyerɛ ne yɔnko. Afei, bere a obiara yɛ nea ɛbɛma ne yɔnko ani agye no, nkakrankakra adamfofa no sɔ. Sɛ yɛbɛtumi afa Onyankopɔn adamfoɔ a, saa ara na ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Yɛbɛyɛ no sɛn?